ISKU MIDKA AH EE JECEL SII KORDHAYA: BEERITAANKA IYO DARYEELIDDA WARSHAD - DHIRTA DAWOOYINKA
Lovage sida warshad ornamental waa xiiso yar, laakiin sidii dhirta basbaaska iyo daawada muddo dheer loo yaqaan. Ariga iyo dhadhanka dhadhanka ah ee jecel waxay u egtahay celery.
Waayo waxa ay u eg tahay jecel, Faransiisku waxay ugu yeeraan celin been abuur ah. Caleenta dhirta ayaa dhab ahaantii la mid ah mataanaha: glossy, taarikada caleenta cagaaran oo dhalaalaya leh geeso boorar ah oo loo qaybiyay qaybo badan. Beerta jilicsan ayaa si degdeg ah u koraysa, sii kordhaya mitir badh. Daqiiqada baadiyaha xoog badan leh. Roots leh nidaamyo badan ayaa lagu ururiyaa lobe weyn oo dabacsan. In dhirta qaangaarka ah, xididdada yihiin ilaa 40 cm dheer, ulaha xididka yihiin brown in midabka. Inflorescences Lovage waxaa lagu ururiyaa dalladaha jilicsan. Dhirta ubaxyada ee Bloomsiyada July. Miraha jilicsan, miraha - abuurka.
Iyada oo ku xiran sababta aad u koreyso, jecel waxay noqon kartaa sanad ama dhowr sano. Haddii aad u guranayso xididada, markaa sannadka soo socda waa inaad mar kale soo baxdaa. Mabda 'ahaan, dhirta waa dakhliga iyo dib-u-soo-saarka si fiican u-abuurka ah.
Ma taqaanaa? Lovage, sida geedo kale oo badan, ayaa lagu xisaabiyaa hantida suugaanta. In Ukraine, waa caado ah in ay rumaysan yihiin in a lovage ku soo xidhan dharka arooska wuxuu keeni doonaa jaahil ah oo aan xad lahayn jacaylka xaaskiisa, waxaa ka sokow, waxay ilaalin doontaa guurka ka shukaansiga iyo muran ka mid ah labada isqaba. Maalmaha fasaxyada kala duwan, gabdhaha waxay kufadhiyaan ubaxyo ubax ah, iyagoo gacmahoodu jecel yahay inay baxaan, iyaga oo rumaysan in aynu jecelnahay cawska si ay gacan uga geystaan ​​guurka hore.
Maxay tahay shuruudaha kor u kaca, doorashada goobta
Horumarinta beeraha ee bannaanka u furan - geeddi-socodku waa, guud ahaan, ma dhibo. Warshadu waxay u adkaysantaa qabowga iyo abaarta. Haddii ay sabab u tahay dhirta aan la waraabin oo aysan jirin wax roobab ah, xitaa qaybta cayayaanka la qalajiyey, jacaylku wuxuu iman doonaa nolosha, isagoo helaya daryeel iyo daryeel dheeraad ah. Warshadu waxay leedahay xididada dheer iyo awoodda leh, sidaas darteed waa wax adag.
Kacaanka ayaa si dhakhso ah u koraa, sidaa daraadeed waxa fiican in la beero iyada oo xayndaabka ama qarka ka ah qulqulka, sidaas darteed, inta sii kordhaya, ma xaaqin dhaqamada kale. Cawsku wuxuu ku kori karaa qorraxda, kama cabsanayo hooska qayb ahaan. Meesha ugu fiican ee jecel waxay noqon doontaa dhinaca koonfureed ee dhismaha ee dhinaca aqalka.
Ka hor intaan la beeri kicin iyo kobcinta sii kordhaya, hubso in aagga aad dooratay in biyaha dhulka ku yaal aysan u dhowaan dusha sare. Carrada loo yaqaan 'lovage' ayaa si fiican u miiray, qoyaan dhexdhexaad ah iyo nafaqo leh.
Waa muhiim! Dhibaato xoog leh oo qoyaan, meesha ugu dhow ee biyaha dhulka, waraabinta xad dhaafka ah, waxay horseedi doontaa burburka nidaamka xididka geedka.
Yooga iftiiminta iftiinka maaha mid aan qarsoodi lahayn, waxaa si fiican u dulqaadan kara hooska, laakiin waxa fiican in la helo xal - iftiin iftiin leh. Qorraxdu waxay lagama maarmaan u tahay dhirta marka midhaha ay ku xidhan tahay abuurka. Lovage u muuqataa in la soo baxay si qorraxda si ay u quudiyaan abuurka leh diiran iyo iftiin.
Qoyaanka iyo heerkulka looga baahan yahay samaynta
Lovage ayaa ka hortagaya qoyaan xad dhaaf ah iyo acidity ee ciidda. Ka hor inta aadan beeri, hubi inaad diyaariso sawirka, quudinta iyo "deoxidize", haddii loo baahdo. Inta lagu jiro xilli sii kordhaya, lovage u baahan yahay waraabin badan - 15 litir oo biyo ah, laakiin hal mar toddobaadkii.
Horumarinta hibada laga bilaabo abuurka ayaa si guul leh u dhacda heerkulkiisu yahay +3 ° C. Run, waqtiga biqilka waxaa la faafin muddo saddex toddobaad ah. Heerkuluska 18ºC, mudadaas ayaa la dhimayaa ilaa toban maalmood.
Sida loo abuuro jecel ee dalka
Lovage jecel yahay meel bannaan oo isaga ku wareegsan, sidaas darteed waxaa lagu beeray fogaan ah 60 cm midba midka kale, farqiga safka waa 70 cm.
Jeexdin leh beerashada haboon iyo daryeelka wakhtigu waxay ku siin doontaa midho goosasho leh. Ka hor inta beerto dhirta u baahan tahay si loo diyaariyo ciidda. Si tan loo sameeyo, inta lagu guda jiro qoyaanka dayrta, baaldi oo ah peat iyo humus, 200 g ash alwaax iyo 20 g of nitrophoska (halkii mitir laba jibaaran) ayaa lagu soo bandhigay ciidda.
Isla markiiba ka hor beerto, ciidda waxaa la bacrimiyay leh superphosphate, sulfate potassium, HOL iyo ash.
Xiiso leh Luuqado badan, magaca "jecel" wuxuu leeyahay hal rootan oo ereyga "jacaylka." Ruush - jacayl-caws, Ingiriisi - "jacayl" (jacayl - jacayl), jarmal "Liebstok" (liebe - jacayl).
Horumarinta hodanka laga bilaabo abuurka
Bishii Abriil, marka ciidda si fiican loo diiriyo, waxaa ugu wanaagsan in la beero lovage ee dhulka furan leh abuurka. Bilowga Maarso, abuurka waxaa lagu beeray sanduuqyada seedling ee carrada caalamiga ah ee dhirta dhirta. Caleemaha koraya waxaa lagu beddelaa dhul furan dhamaadkii bishii Abriil iyadoo masaafo hal mitir oo midba midka kale ah.
Sidee loo abuuraa abuur abuur ah oo isla markiiba ah dhul furan? Nidaamka waa sida soo socota: jeexjeexyada waa gacangelin, illaa 2 cm, masaafada u dhexaysa dalaggu waa ilaa 10 cm Laba todobaad gudahood, geedo ayaa gaajoobi doona, waxay u baahan yihiin in la yareeyo. Marka ay duurka u bilaabaan inay koraan, iyaga ku faafi fogaan ah 70 cm - 1 m midba midka kale.
Si dacaayad by gooyn, gooyaa xoog leh a shoot ka soo lovage leh laba caleemo ah iyo iyaga ku beeran sanduuq buuxiyey ciid qoyan. Nidaamka laftiisa iyo nidaamka xididka labadaba si dhakhso ah ayay u kobcaan, laba toddobaad gudahood jarista ayaa loo rogi karaa meel joogto ah.
Sidee u koraan lovage by qaybta baadiyaha
Lovage waa la koray iyo habka loo qaybinayo baadiyaha, daryeel waa isku mid ah sida abuur beeridda. Buundooyinku waxay u qaybsan yihiin dhammaadka guga. Si tan loo sameeyo, qodo baadiyaha saddex sano jir ah. Beedka wuxuu u qaybsan yahay qaybo kala duwan, mid kasta oo ka mid ah waa inuu leeyahay ugu yaraan saddex xidid oo adag iyo caleemo. Delenki ku beeray meel diyaarsan, oo la waraabiyey. Waqtiga ugu fiicnaanta ee noloshooda iyo jacaylka fruiting wanaagsan - lix sano.
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan daryeelka ee la jecel yahay
Lovage - ma aha warshad balaadhan: oo sii kordhaya, iyo daryeelku kuma koobna dhibaatooyin kasta. Warshadu waxay u baahan tahay waraabin badan oo ka maqan maqnaanshaha roobka, jaridda dhirta iyo dabacsanaanta ciidda, caleemaha manjooyin sannadka labaad ee nolosha iyo quudinta.
Waxaad quudin kartaa warshadda leh xaashida shimbiraha, laga soosaaray mullein, macdanta macdanta. Nitrogar ayaa loo baahan yahay muddada koritaanka, iyo fosfooraska iyo potassium mustaqbalka. Wixii horumarinta nidaam xidid adag ee lovage ka saarto ubax. Halkan, sidoo kale, ha ka badin: caleemaha ubaxyada yar waa in la tagaa.
Digniin! Dhirta ubaxyada ayaa soo jiidata cayayaanka waxtarka leh ee burburiya cayayaanka.
Goorta la goosanayo lovage
Goosashada jilicsan ee la goostay xilliga xagaaga. Haddii aad koraan ubaxyada caleemaha, ha ka tegin caws ubax badan oo ku yaal geedka. Caleemaha jilicsan ayaa lagu soo ururin karaa hadba sida loogu baahan yahay saladhka. Laga soo bilaabo duurka u koray abuurka ah, caleemaha aan la jecleysan in la gooyaa. Ururinta xididdada dhirta waxaa la fuliyaa xilliga dayrta, si taxadar leh u qodaya iyo nadiifinta dhulka. Xididdada dhirta waxaa la dhaqaa, la qalajiyey, la jajabiyey oo lagu kaydiyey weel dhalada ah.
Wixii caleemaha goosashada iyo afkoda ayaa la googooyaa xididka. Dalagga ayaa la qalajin karaa ama la qaboojin karaa jiilaalka. Bannaanka qallalan waxaa lagu kaydiyaa weel quraarad qalalan oo meel gudcur ah.
Lovage waa warshad farabadan: waxaa loo cunaa sida lafdhabarta, oo loo isticmaalo daawada dhaqameed, ee kondomoole. Xilliga xagaaga, jecel waxay ka caawisaa inay ka ilaaliso cayayaanka dhiiga-nuugista ee guriga ka baxsan: ku dhaji cufsaan yar oo caws ah oo hareerihiisa ah hurdadaada hurdana laguma baqayo xayawaan aad u xun dhegtaada.